Downloads 6 241
Munyori: Patrick Le Luyer http://oldpat.e-monsite.com
Super Gepard 912 yepamusoro chete hwakadzama VC uye tsika ruzha, sezvazviri ndege wokuenzanisira, vakagadzirira kubhururuka. The Ulm iri kugadzirwa nenzira aero AND Services, Uye rinobhururukira kuti aero AND kirabhu pakati Kusvika Chatel muFrance. Rangarira cheki mazita pamberi chebhodhingi, iwe vachawanawo dzinotaura vose akurumidze zvinowanikwa hwendefa kubva dashboard kuburikidza nekudzvanya pamusoro icon (pasi GPS).
The aero AND Services Guépard Guépard 912 munhu French maviri-chigaro microlight kabhini monoplane chakagadzirirwa uye yakavakwa aero AND Services Guépard kunosangana FAI Microlight mureza, zviri kutengeswa somunhu Kit zvikamu kuti mudzidzi kuvakwa.
The Guépard 912 ari kabhini monoplane rurefu-akatasva bapiro braced, ine wakaiswa tricycle kumhara giya uye akanyudzwa kabhini maviri agere parutivi-ne-divi configuration. The Guépard inovakwa kubva welded simbi chubhu ine ndege jira chifukidzo asi kuri kuwanikwa ane riveted simbi chifukidzo. Kunyange zvazvo aigona kushandisa nzira dzakasiyana-siyana injini nesimba outputs kubva 65 kuti 100 zvapano (48 kuti 75 KW) ari 100 zvapano (75 KW) Rotax 912S ari yaiwanzoshandiswa.